एक पेंसिल को मामला सिर्फ एक स्कूल विशेषता छैन। यस विषयको वास्तविक मूल्य भनेको छ कि उसले आफ्नो मालिकलाई एक कार्यस्थल व्यवस्थित गर्न, सङ्कलन गरिएका स्थानहरूमा पेन्स, मार्कर, पेन्सिल र अन्य स्टेशनरीमा राख्ने। पेंसिलको लागि केही प्रकारको नक्कलमा भूमिका खेल्न, र सानो विद्यार्थीले धेरै आमाहरूको अदृश्य उपस्थिति महसुस गर्यो, यो स्कूल आफैलाई पेंसिल बनाउन सर्वोत्तम हो। मास्टर वर्गमा, प्यानिसिलको मामला आफैलाई सिलाई गर्न दुई विकल्पहरू छन्।
कपडा बनाइएको सरल पेंसिल केस
आफ्नै पेंसिलको लागि पहिलो पेंसिलको मामला पनि शुरुवाती सीमट्रेसको द्वारा बनाइन्छ।
घनी कपास या पेंसिल मामला को बाहिर को भाग को लागि उज्ज्वल कपडे को एक मिश्रण;
पेंसिल अवस्थामा भित्रको लागि कपडा;
sintepon या पतली बल्लेबाजी;
टेप लम्बाई 45 - 50 सेमी।
कपडाबाट हामी 45x15 सेमी को मापने तीन आयतहरु लाई काट दिए। ए - पेंसिल को मामला को बाह्य भाग, बी - आन्तरिक भाग, सी - पेंसिल मामला। तस्विरमा देखाइएको टुक्राहरू ढाल्नुहोस्।
आधा भाग भाग C, हामी यसलाई ठाडो मार्किंग राख्दछौं र सिलाई मेनुमा अंकहरू कटौती गर्दछौं। हामी टेप जोड्दछ आधा भागतिर बीचको भागमा।
अगाडि भागको तयारीमा हामी भाग ए लागू गर्छौं, यसलाई पिनको साथमा छिटो पार्दै। हामी पेंसिल को सबै भागहरु लाई पीसें, एक ओर छेद पछि उत्पादन को बारी को लागि एक छेद छोड (घुमाओ विपरीत विपरीत मा एक देखि गर्न को लागि टेप संलग्न छ)।
बाँया प्वालबाट हामी उत्पादन मोडिदिन्छौं। सबै कोनेहरू सावधानीपूर्वक सजिलै छन्, लोहेको साथमा धुरीहरू र सम्पूर्ण परिमितिमा मेसिन लाइन बिछ्याउँदै, अर्ध सेन्टिमिटरको किनारमा पछाडि राखिन्छन्।
सीधा र तह गरिएको ढाँचामा उत्पादनको अन्तिम फाराम।
डेनिम पेंसिल केस
उस्तै एल्गोरिदम द्वारा, तपाईं आफैलाई एक स्टाइलिश पेंसिल को मामला जीन्स बाट बनाइयो। एक असामान्य उत्पादन सिर्जना गर्न प्यान्ट को एक अधिक प्रभावी भाग को चयन, हामी एक जेन्स जेब मा एक सिलाई छ र विभिन्न रंगहरु को एक डेनिम कपडे को चयन गर्न को सिफारिश।
पेंसिल केसका भागहरू तयारी गर्नुहोस्। आधार मा A - जेब, बी डेनिम वर्ग 25x25 सेमी (अंदर), सी - आयत 25x13.5 सेमी (कार्यालय उपसाधन), डी - स्क्वायर 7x7 (ईरर को लागि जेब), ई -2चौकों 20x20 सेमी (तल अगाडिको पक्षका भागहरू); F -2आयत 25x20 सेमी (अगाडि पक्षको छेउका भागहरू), जी आयत 25x4 सेमी (अगाडिको पक्षको शीर्ष पक्ष)।
भाग ई जेबको तल्लो तिर कोणमा लागू गरिएको छ। दुई भागहरु जोड्नुहोस्, टाउको साथ पिन प्यान्ट गर्नुहोस्, खुल्ला पार्नुहोस्। सुर्खेत र कालो।
हामी शासक को सहायता संग पेंसिल मामला को तल मा योजना बनाछन, अधिक हटाउनुहोस्। अर्को पक्षमा आयत लागू गर्नुहोस् र पनि उल्लेख गर्दै अतिरिक्त कटौती गर्नुहोस्।
हामी पक्ष टुक्राहरू बाँध्छौं, भाग F ले, सबै भन्दा बढी कटौती गर्दछ। साइडका सेन्टरहरू सिनेपछि हामी केन्द्र पत्ता लगाउँदछौँ, यसलाई चिन्ह लगाउनुहोस्, 25 सेन्टिमिटरको उपाय गर्नुहोस्। हामी सबै अनावश्यक व्यक्तिहरू काट्यौं। भाग G.
हामी पेंसिल को मामला को अंदर बनाउन को लागी शुरू गर्छन। भाग सी एक तरफ लिपिन्छ र हामी सजावटी मिसिन सिलाई बनाउँछौं। शासकको प्रयोग गरेर विभाजनका लागि सहायक उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। भाग डी एक पक्षबाट काटिएको छ र हामी टिप्पणी लिन्छौँ। हामी एक सानो स्टक बनाउन को लागी एक स्टिरकल राख्न खर्च गर्छौं।
विवरण बी र सी जोडिएको छ, prikolov पिन, हामी खर्च गर्छौं।
हामी पेंसिलको दुई भागहरू जोड्दछौं, अनुहारहरू पछि फर्काइन्छ। एकै भागमा, हामी 23x23 सेन्टिमिटरको स्तरीय डिजाइन गर्दछौं (यो पेन्सिलको आकार हो)। हामी भागहरू पिङ्गोमा खसेर र यसलाई घुमाउछौं, एक सानो प्वालमा छोडेर।
किनाराहरू माथी काट्नुहोस्, क्यान्सरहरू काट्नुहोस् र घुम्नुहोस् (थप सफल बेरोजगारीको लागि, तपाईं सुशीको लागि एक स्टिक लागू गर्न सक्नुहुन्छ)। हामी उत्पादनको माथि उठाउछौं।
Thermo-pistol प्रयोग गरेर, वेल्क्रो भित्र भित्र भित्र, र त्यसपछि उत्पादन बाहिर।
विद्यालयको लागि एक पेंसिलको मामला, आफ्नै हातले बनाएको, तैयार छ। तपाईंको आदर विद्यार्थी यस्तो मूल पेंसिल अवस्थामा पनि अझ राम्रो सिक्न सक्नेछ!
आफ्नै हातले तपाईं विद्यार्थीको लागि अन्य रोचक सामानहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, पेंसिल र बुकमार्क ।
आफ्नो हातले महसुस गर्न घरको महसुस र मास्टर वर्ग बाट
टेपस्ट्री सीवनको साथ कढाई
आफ्नै हातले काउओबी टोपी
रिब्रोइड कसरी गर्ने?
हिमपात पहिलेको पोशाक
आफैलाई रङ्ग कसरी बनाउने?
घोडाशैली चकलेटहरूबाट बनाइयो
बिहानको प्रदर्शनको लागि चेकहरू कसरी सजाय गर्ने?
नयाँ वर्ष टिल्डहरू
बुनाई सुई संग पैटर्न "लहर"
खिलौहरूको लागि बक्स आफ्नै हातले
बियरवर्क - मास्टर वर्ग
पर्दाहरूको लागि पिक अप
लुगा कपडे केल्विन क्लेन
सफाको लागि क्लीनर
नाओमी क्याम्पबेल पपार्जीजीबाट लुकेका छ?
अण्डासँग स्टेक गर्नुहोस्
साईन - बटन बन्द भयो
जीन्स र मालभिना
बिहीवार नमक - भूखंड
धन्यवाद दिवस कसरी सेलिब्रिटी परिवारको चिन्ह लगाउनुभयो?
एक बहुविध मा फ्राइड चिकन
कपडाबाट बनेको "काईरो"
महिला जिम जूता - के छान्नु र के गर्ने लुगा लगाउने?
गाउलाई ठूलो खुट्टा संग कसरी उपचार गर्ने?
बच्चा मा एडिनोइड्स
नेल डिजाइन 2014
तपाईं मधुमेहसँग खाना खाउन सक्नुहुन्न?
मोक्स माथ ट्रेकुचर